Sawirada Van Gogh oo leh saameynta Janjeerka Janjeera | Abuurista khadka tooska ah
El Janjeeri-wareejin ama sidoo kale loo yaqaan saamaynta diorama, waa dhalanteed indha-indheyn ama saameyn caadi ahaan lagu gaaro qaab dijitaal ah taas oo muuqaal cabirkiisa-nololeed loo beddelay si ay ugu ekaato thumbnail. Nidaamkan waxaa lagu sameyn karaa cilad ah oo caadi ahaan si toos ah loogu dabaqo dusha sare iyo hoose ee sawirka. Tani waxay gaareysaa natiijooyin aad u wanaagsan, sida aad ku aragtay sawirro qaarkood oo aad mooddo inay u egyihiin inay soo bandhigayaan dhismooyin iyo walxo sidii inay yihiin wax yar ama toy.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa saameyntan Janjeerka-isbeddelka ee lagu dabaqay sawirrada halyeeyga reer Holland Van Gogh, xaqiiqaduna waxay tahay inay soo saaraan natiijo u muuqata inay aad u layaab ku tahay shaqooyinka qaarkood, sida qaar ka mid ah curiyayaasha iyaga curiyaa ay u muuqdaan. Saamaynta la gaadhay waa mid gebi ahaanba layaableh sida aad ku arki karto qaar ka mid ah sawirrada aan isla wadaagno isla boostadan.
Waxa kale oo ay noqon doontaa wax lala yaabo mararka qaarkood waxay umuuqataa inay bixiso saameyn 3D ah oo lagu gaadhay saameyntan la adeegsaday shaqooyin dhowr ah, oo hadaan xoogaa ka fikirno in farshaxankan weyn ee kacaanka ah waqtigiisii ​​uu ku guuleysan lahaa qaar ka mid ah qalabka aan maanta haysano sida Photoshop ama Illustrator.
Mid kale oo ka mid ah xaqiiqooyinka aan ka soo qaadaneyno leexashada Janjeer ee lagu dabaqay dhowr ka mid ah shaqooyinka ranjiyeha Nederlandka ayaa ah maskaxdiisa soo saarista dhammaan noocyada waxyeellooyinka leh midabka iyo istaroogga. Halyeey ka baxay waqtigiisa si uu ugu dhowaado mustaqbalka taasna mahadsanidiisa shuqulladiisa ayaan wali sii wadaynaa inaan la yaabno wanaagga weyn ee uu ku lahaa maskaxdiisa hal abuurka ah iyo hadiyadaha farsamo ee burushkiisa.
Haddii aad rabto marin u hel dhammaan sawirada lagu dabaqay saameyntan waxaad ka heli kartaa degelkan loo yaqaan Farshaxanka. Munaasabad kale oo weyn oo lala yaabo caqliga ka soo jeeda waayihii kala duwanaa sida Van Gogh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Saamaynta 'Janjeeri Janjeer' ayaa lagu dabaqay sawirada Van Gogh